:: My Little World ::: May 2010
TipMeet.com မှာ အကောင့်တစ်ခု ဖွင့်လိုက်မယ် ဆိုရင် Free US$ 3.00 ရနေပါတယ်။ အဲဒီ ၃ ဒေါ်လာ သုံးပြီး ရန်ကုန်ကို ခေါ်ကြည့်တာ ရတယ်လို့့သိရပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ တကောင့်ဖွင့်ကြည့်တာ ယူအက်စ် ၃.၀၀ ရတာပါ။ အကောင့်ထဲ စ၀င်ဝင်ချင်းမှာ USD 0.00 လို့ ပဲပေါ်တာတွေ့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြား Page တွေကို သွားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Home ကိုပြန်လာကြည့်တဲ့ အခါ USD 3.00 ဆိုပြီး ပေါ်လာတာ တွေ့ ရပါတယ်။ အလုပ်မှာဆိုတော့ အကောင့်ပဲ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဟိုပိတ်ဒီပိတ် ဆိုတော့ စမ်းခေါ်ကြည့်လို့မရဘူး။ ရတဲ့သူများ ခေါ်နိုင်အောင်လို့ထပ်ဆင့် သတင်းပေးတာပါ။
ဘယ်လို ခေါ်ရမလဲဆို "TipMeet2Go" ဆိုတဲ့ Tag မှာ ပြီး ကိုယ်ခေါ်ချင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ထည့် (00 + country code + city code + phone number) ခေါ်ရတယ်လို့ထင်တယ်။ ကိုယ်လည်း မခေါ်ကြည့်ရသေးလို့သေချာ မပြောနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒီမှာတော့ ဖတ်လို့ ရတယ်။ How to makeacall ။ ကိုယ့်တိုင် ခေါ်လို့ သာ မရတယ်။ စမ်းလိုက်တာ အကောင့် ၃ ခု ဖွင့်ပြီးသား ဖြစ်သွားတယ်။ :D
အကြံဥာဏ်ပေးချင်တာက ဒီလို ဆိုဒ်တွေ သုံးမယ်ဆို ကိုယ့်ရဲ့ Primary Email မသုံးပါနဲ့ ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အလကားရတဲ့ Gmail/Yahoo/Hotmail မှာ အီးမေး အကောင့်တွေ စိတ်ကြိုက် ထပ်ဖွင့်ပြီး သုံးပါ။
Credit to Ko Boyz
Posted by Nay Nay Naing at 5/31/2010 01:07:00 PM2comments
Posted by Nay Nay Naing at 5/30/2010 06:34:00 PM4comments
မယုံဘူးလား။ တကယ် စားခဲ့တာပါ။ ဓာတ်ပုံတွေ သက်သေ ရှိပါတယ်။ ရှားရှားပါးပါး ငါးပုဏ္ဏား။ မြန်မာပြည်က လာကြတာပါ။ ဥတွေနဲ့ ။ ငါးပုဏ္ဏားကို ကြော်ပြီး ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်သီးကြော်တွေနဲ့ ပြန်ရောထားတာ။
စားလို့ အရမ်း ကောင်းတယ်။
ကိုယ်တုိုင်ချက်တာ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ သဘောကောင်းတဲ့ အစ်မတစ်ယောက် ချက်ကျွေးတာပါ။ (ဟိုအစ်မကြီး မဟုတ်ဘူး။ သူက ကိုယ့်လိုပဲ ဆိုင်မှာပဲ ခပ်လွယ်လွယ်ဝယ်စားတာ။ ) ငါးပုဏ္ဏား စားချင်တယ် ပြောလိုက်မိလို့မှတ်မှတ်ရရ ထည့်ချက်ကျွေးတာ အထူးကျေးဇူးပါ။ အရမ်းစားလို့ ကောင်းပါတယ်။ ငါးကြော်ကလည်း အများကြီးမှ တကယ့်ကို အများကြီး။ အပေါ် ပုံက ငါးကြော် အားလုံးရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ပဲ ရှိတယ်။ တခြားဟင်းတွေလည်း အများကြီး ချက်တယ်။ တခြားဟင်းပုံတွေတော့ နောက်မှ။
အခုတခါက ငါးပုဏ္ဏား သီးသန့် ...
ရှားရှားပါးပါး ကြိုက်တဲ့ ငါးဟင်း။ အိမ်မှာ ဆိုရင် ငါးပုဏ္ဏားပေါ်ချိန် ရောက်ပြီဆိုတဲ့ အခါတိုင်း အမေက ဥတွေနဲ့ငါးပုဏ္ဏားတွေကို လိုက်ရှာဝယ်၊ ကြော်ပြီး ခရမ်းချဉ်သီး အနှစ်နဲ့ဆီပြန် ပြန်ချက်ပေးလေ့ ရှိတယ်။
စားရဖို့ မလွယ်လို့အသေအချာ မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ စင်္ကာပူက လူတွေ စားချင်တယ်ဆို စစ်တီးဟောမှာ ငါးပုဏ္ဏား ၀ယ်လို့ ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေတော့ မသိပါ။ စားချင်ရင် ဒီကိုလာ။
Posted by Nay Nay Naing at 5/28/2010 10:46:00 PM 11 comments
အိပ်ချင်နေတယ်။ အခုအချိန်အထိ Testing မစသေးဘူးဆိုတော့ ဘာမှလုပ်စရာမရှိ ဖြစ်နေလို့ဖြစ်မယ်။ တခြားအလုပ်တွေလည်း မလုပ်ချင်တော့ဘူး။
ဒီနေ့နေ့ လည် လေယာဉ်နဲ့အစ်ကို ရန်ကုန် ပြန်သွားတယ်။ ခုလိုပြန်သွားတော့လည်း အစ်ကိုကြီးကို သတိရမိသား။ နောက်ဘယ်တော့ ပြန်တွေ့ မလဲ မသိဘူး။ အစ်ကို ဒီမှာ စာမေးပွဲလာဖြေတုန်းကလို့ကြာကြာတွေ့ ရဖို့ က ခက်သွားတယ်။ ကိုယ်ရန်ကုန်ပြန်တဲ့ ခနတစ်ဖြုတ် အချိန်မှာလည်း အစ်ကိုက ရန်ကုန်မှာ မရှိတာများတယ်။ အစ်ကိုတွေ မောင်တွေ နဲ့ က သူတို့ဒီလာမှသာ တွေ့ ရလေ့ရှိတာ။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေက ဟိုသွားဒီသွား၊ ဟိုဝယ်ဒီဝယ် လုပ်နေတာကြောင့် အိမ်ပြန်ချိန် အမြဲနောက်ကျတယ်။ တခြား ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ရတာတွေ မပင်ပန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တချို့ ပစ္စည်းတွေ လိုက်ရှာ ၀ယ်ရတာ အတော်ကြီး ပင်ပန်းတယ်။ တကယ်တော့ ဘာဝယ်ရမှန်း မသိတာပါ။ ကိုယ်မှ မ၀ယ်တတ်တာ။ စိတ်လည်း မ၀င်စားဘူးလေ၊ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လည်း တခါမှ မ၀ယ်ဖူးဘူး။ ဒီတခါလည်း ဟိုအစ်မကြီးကို အရမ်း သတိရပါတယ်။ သူသာဆို ဒါမျိုးတွေကို အခက်အခဲမရှိ လွယ်လွယ်ကူကူ ၀ယ်တတ်မှာ။
အမေက ဒါလေးတွေ ၀ယ်ပေးလိုက်နော်ဆိုပြီး အစ်ကိုစာမေးပွဲအောင်လို့ပြန်လာတော့မယ်ဆိုကတည်းက အသေအချာမှာတာ။ ဘာဝယ်ရမှန်းမသိလို မ၀ယ်ဖြစ်ဘူး။ မနေ့ ကတော့ နေ့ တစ်ဝက်ခွင့် ယူတယ်။ မှာတာတွေ မထည့်ပေးလိုက်ရင် ဆူခံရတော့မှာ။ ၁ နာရီအလုပ် ကထွက်၊ ထမင်းစား၊ ၂ နာရီက ဆိုင်တွေလိုက်ကြည့်တာ ညနေ ၆ နာရီမှ တော့ မ၀ယ်လို့ မဖြစ်တော့ဘူးဆို စိတ်ကူးတည့်တာတွေ ၀ယ်ထည့်လိုက်တယ်။ အေးရော။ စိတ်ပင်ပန်း လိုက်တာ။ အလုပ်လုပ်ရတာ ဒီလောက် ပင်ပန်းတယ် မခံစားရဘူး။
အရင်က တခြားသူတွေအတွက် ၀ယ်မပေးဖူးဘူး။ ညီမ အတွက်နဲ့အမေ့အတွက်ပဲ ၀ယ်ပေးလေ့ ရှိတာ။ ညီမလေး အတွက်က ရှင်းတယ်။ လျှောက်သွားရင် စိတ်ကူးတည့်တာတွေ့ ရင်၊ ပို့ ဖို့ လည်း အဆင်ပြေတယ်ဆို ၀ယ်ပေးလိုက်တယ်။ သုံးချင်သုံး မသုံးချင်နေ၊ ဘာမှ ဆင်ခြေမတတ်နဲ့ ။ အမေ့အတွက်က ၀ယ်ရလွယ်တယ်၊ လူကြီးအတွက်လည်း ဖြစ်ပြန်၊ ကျွန်မတို့ မောင်နှမတွေ၊ ၀မ်းကွဲအစ်ကိုတွေမောင်တွေ ၀ယ်ပေးနေကြလေ့ရှိတဲ့ အမျိုးအစားတွေ၊ ပုံစံတွေက သိပ်ရွေးစရာ လည်းမရှိဆိုတော့၊ ပုံစံ ထပ်မနေအောင်သာ နည်းနည်း သတိထားဝယ် လိုက်ရုံပဲ။ ကိုယ့်အမေ ဘာလိုပုံစံ ကြိုက်တယ်ဆိုတာ သိနေလို့လွယ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အခုဟာက တစ်ဝမ်းကွဲအစ်မ အတွက်နဲ့ယောင်းမ၀မ်းကွဲလို့ခေါ်မလား တစ်ဝမ်းကွဲ အစ်ကိုရဲ့ မိန်းမရယ်အတွက် ၀ယ်ရတာ။ မ၀ယ်ပေးချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဘာသာ ကြိုက်တာရွေး၊ ကိုယ်ပိုက်ဆံရှင်းဆို ကိစ္စမရှိဘူး။ ဘာမှန်းမသိ ကိုယ်ကရွေးဝယ်ပေးရတာကို မကြိုက်တာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုဆို ၀ယ်ပေးလိုက်တာတွေ အမေ တွေ့ နေလောက်ပြီ။ ဘာပြောမလဲ မသိဘူး။ မကြိုက်လည်း ဘာမှပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီသမီးက ဒါမျိုးဝယ်ထည့် ပေးလိုက်တာက အတော်လေး ကြိုးစားပေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်း အမေ သိလောက်ပါတယ်။
တကယ်ဆို ဘာမှ ထူးထူးဆန်းဆန်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ် ၀ယ်လေ့လည်း မရှိ၊ စိတ်လည်း မ၀င်စား၊ သူများတွေ ဘယ်လိုဟာတွေ သုံးတယ်ဆိုတာမျိုးလည်း သတိထားမကြည့်မိဆိုတဲ့အတွက် ပင်ပန်းနေတာပါ။ ဟိုအစ်မကြီးဆို အပြင်သွားလို့ပြန်လာရင် မှတ်သားစရာသာ မပါမယ်၊ ဒါမျိုး တစ်ခုတော့ ပါလာလိမ့်မယ် ပြောထားတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အစ်မကြီးကို သတိရနေရတာ....... တကယ်ပါ။ အမြဲ တမ်းလို့မပြောနိုင်ပေမယ့် တိုက်ဆိုင်မှု့ တွေကြုံလာတဲ့ အခါတိုင်းမှာတော့ အစ်မကြီးကို သတိရနေပါတယ်...
9:25 PM ..
ခေါင်းစားမယ့် အလုပ်လေးတွေပေါ်လာလို့လုပ်လိုက်ပါအုံးမယ်။
ဒီနေ့သန်းခေါင်းမကျော်ခင်တော့ ပြန်ရမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။
သန်းခေါင်ကျော်သွားပြီ။ အိမ်ပြန်ချိန် မနက် ၁း၀၀။
Posted by Nay Nay Naing at 5/26/2010 09:28:00 PM2comments
FB ထဲက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဒီသီချင်းစာသားတချို့ တင်ပြီး သီချင်းခေါင်းစဉ်ဘာလဲ၊ ဘယ်သူဆိုတာလဲ မေးထားလို့ပြန်နားထောင် ဖြစ်သွားတယ်။ စာသား မြင်တာနဲ့ ဘယ်သူဆိုတယ် ဆိုတာ မှတ်မိတယ်။ မဆိုးဘူး။ တော်တယ် (ကိုယ့်ဘာသာချီးကျူးလိုက်တယ်) အဲဒီသီချင်းအခွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၃-၄ နှစ်လောက်က သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ပြလို့နားထောင်ဖြစ်သွားခဲ့တာ။ ဒီသီချင်း မဆိုးဘူးဆိုပြီး သဘောကျတာနဲ့ဒီမှာ တင်ခဲ့သေးတယ်။ ခုတခါ စာသားတွေ တင်လိုက်တယ်။ အဲဒီ အဖွဲ့ နဲ့သက်ဆိုင်သူ.... သီချင်းတွေကို အားပေးနေပါတယ်လို့ကြုံရင်ပြောပြလိုက်ပါ ;)
သိတ်ချစ်တယ် - Two Plus
ရင်တွေခုန်တာ ထိန်းမရခဲ့.. ငါမင်းကိုချစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြောမိတော့
ငါ့ကိုချာချာလည်အောင်ဟားတိုက်ခဲ့ . ဒီစကားကို မင်းရင်ထဲ ခံစားချက်မဲ့
ယုံအောင်ပြောဖို့ ခက်တယ် မင်းရဲ့သံသယစိတ်တွေကြောင့်
မင်းတစ်ယောက်တည်း ချစ်တာ.. မပြောင်းလဲမယ့် ကိုယ့်အချစ်များ
တကယ်ပါ ရင်ခွင်မှာ စိုးမိုးလွန်း.. အချိန်မှန် မင်းရဲ့အပြုံးနဲ့ စကားသံများရယ်....
အမြဲတမ်းပဲ စွဲလမ်းနေခဲ့တယ်... သေချာတယ် မင်းကိုသိပ်ချစ်တယ်.
ရင်မှာတကယ်ကိုစိုးရွံ့ ခဲ့ မင်းစိတ်ဆိုးကာ ငါ့ကို မုန်းမယ်နေ့ 
ငါလေသိလိုက်တယ် တနေ့ ကပဲ .. မျှော်လင့်ချက်မဲ့တဲ့ မင်းရဲ့စကားများနဲ့ 
စိတ်ညစ်နေလည်းပဲ မင်းအသံကြားရင် ပြုံးမိတယ်
ယုံအောင်ပြောဖို့ ခက်တယ် မင်းကိုချစ်တဲ့အကြောင်း
ဘယ်လိုပြောပြရမယ် မင်းရဲ့ သံသယစိတ်တွေကြောင့်
အားနေတယ်။ ဒီညနေ အလုပ်လုပ်ရမယ်၊ မပြန်ရသေးဘူး။ အခု ညနေစာ ထမင်းသွားစားမယ်။ ပြန်လာရင် တခြားစိတ်ကူး တည့်တာတွေ ဆက်ရေးချင် ရေအုံးမယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 5/26/2010 06:11:00 PM2comments
Posted by Nay Nay Naing at 5/20/2010 02:08:00 PM 10 comments
ကြွားမလို့နေရာကြိုဦးထားတယ်။
ဒီနေ့အချိန်သိပ်မရလို့ .
Posted by Nay Nay Naing at 5/19/2010 11:30:00 PM 10 comments
Website တွေ၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာ blogs တွေသွားရင် tools ပေါင်းစုံ သုံးပြီး ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်မြို့၊ ဘယ် IP စသည်ဖြင့် လာကြည့်တဲ့သူတွေကို track လုပ်တတ်ကြတယ်။ ဒါမျိုးလုပ်တာတွေက ကိုယ်ရဲ့ privacy ကိုထိခိုက်တယ်၊ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်တယ် ခံစားရရင် ဒါလေး သုံးကြည့်ပါ။ Web bugs တော်တော်များများကို block လုပ်ပေးပါတယ်။ Blogs တွေ သွားကြည့်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ခြေရာလက်ရာ မကျန်ခဲ့တော့ဘူးပေါ့။ သုံးဖြစ်နေတာတော့ ကြာပါပြီ၊ တနှစ်နီးပါးလောက်ရှိပြီ ထင်တယ်။ အခုမှ စိတ်ကူးပေါက်လို့ share လိုက်တာပါ။
သုံးရတာ လွယ်ပါတယ်။ Ghostery Add-on ကို Install လုပ်ပြီး Firefox ကို restart လုပ်လိုက်ရင် Firefox ရဲ့ အောက်ဆုံးက Status bar မှာ ဒီလို icon လေး နဲ့ကိုယ်ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုဒ်မှာ Track လုပ်နေတဲ့ အရေအတွက် ပေါ်နေကို တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ Icon လေးပေါ် Click လုပ်ပြီး ပိတ်ချင်တာကို တစ်ခုချင်း ရွေးပိတ်လို့ ရသလို Detect လုပ်နိုင်သမျှ အကုန်ပိတ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့Blocking (On) ဆိုတာကို ရွေးထားလိုက်လည်း ရပါတယ်။
Ghostery Download Center
Ghostery Addon for Firefox ကို ဒီနေရာမှာ ယူလို့ ရပါတယ်။ တခြား IE နဲ့Chrome အတွက်ကိုလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Chrome မှာတော့ Blocking features မရသေးပါဘူး။
တခြား သုံးလေ့ရှိတဲ့၊ အသုံးဝင်တဲ့ Firefox add-on တချို့ ပါ။
Tamper Data နဲ့ Live Http headers က ကိုယ်သွားကြည့်တဲ့ website ကကိုယ့်ကွန်ပြူတာထဲကို malicious code တွေ inject လုပ်ထည့်နေတယ်လို့သံသယဖြစ်တဲ့အခါ http request နဲ့ response information တွေကို အသေးစိတ်ကြည့်ပြီး review လုပ်နိုင်ပါတယ်။ web developer တွေ
debugging လုပ်ရာမှာလဲ အသုံးတည့်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Autonomous System (AS Number) lookup လုပ်တဲ့ addon ပါ။ Network Engineer တွေအသုံးတည့် ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကိုယ်သွားကြည့်တဲ့ website ကို host လုပ်ထားတဲ့ server IP address ကို အလွယ်တကူသိနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်သွားကြည့် တဲ့ website တွေဟာဘယ် web server အမျိုးအစားသုံးထားလဲဆိုတာ သိချင်ရင် ဒါလေး သုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တခြား header information တွေလည်း ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 5/18/2010 11:39:00 PM3comments
Posted by Nay Nay Naing at 5/18/2010 04:53:00 PM3comments
ဓာရဏပရိတ်တော်အား ကြားနာ၊ရွတ်ဆို ပူဇော်လိုသူများအတွက်
ဓာရဏပရိတ်တော် ပါဠိ သီးသန့်- ကြာနီကန်ဆရာတော် (Download)
ဓာရဏပရိတ်တော် ပါဠိ နှင့်အနက် - ကြာနီကန်ဆရာတော် (Download)
ဓာရဏပရိတ်တော် ပါဠိ ၊ ပါဠိ နှင့်အနက် - ကြာနီကန်ဆရာတော် (Download)
ဓာရဏပရိတ်တော် ပါဠိ နှင့်အနက် စာသားများ (From LokaChantha)
ဓာရဏပရိတ်တော်သီးသန့်ရွတ်ဆိုပူဇော်ချင်သူများ အဆင်ပြေစေဖို့ ရန် dhammadownload မှာ တွေ့ ရှိတဲ့ ကြာနီကန်ဆရာတော် ဟောကြားတော်မူသော ၁ နာရီကျော်ကြာမျှ ရှည်လျားသည့် တရား File ကို ဖြတ်တောက်ပြီး Mp3 Files ပြုလုပ်ကာ Mediafire မှာ ပြန်လည် မျှဝေထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Source : dhammadownload.com
Labels: Download, Myanmar, Religion
Posted by Nay Nay Naing at 5/17/2010 12:15:00 AM 12 comments
Posted by Nay Nay Naing at 5/14/2010 03:52:00 PM0comments
Congratulations on passing your exam!!!
We're very happy and proud of you!
Posted by Nay Nay Naing at 5/13/2010 03:35:00 PM6comments
ပဲပြုတ်ဆီဆမ်း၊ ကြက်ဥကြော်နဲ့ထမင်းကြော်
ပဲပြုတ်ဆီဆမ်း၊ ကြက်သား (ထင်တာပဲ) နဲ့ထမင်းကြော်..
ဒီပုံတွေရိုက်ထားတာ ကြာပြီပေါ့။ မနှစ်က မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့ အချိန်၊ ခရီးထွက်ဖြစ်တုန်းက ရိုက်ထားတာ။ May 14 2009 က ရိုက်ခဲ့တာ ဆိုတော့ကား မနှစ်က ဒီလိုအချိန်၊ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ခရီးသွားနေခဲ့တယ် ဆိုတာ ပြန်သတိရမိ သွားတယ်။ အဲဒီခရီးစဉ်အကြောင်းတောင် ဟိုတိတိ ဒီတိတိ ပဲ၊ အသေးစိတ် မရေးဖြစ်ဘူး။ ဒီအပေါ်က ထမင်းကြော်ပုံတွေက ရန်ကုန်မြို့ ထဲပြန်အ၀င် ပဲခူး ထင်ပါတယ်၊ အဲဒီမှာ မနက်စာ စားဖို့ကားရပ်ပေးတုန်းက စားဖြစ်တာတွေပေါ့။ ကားစီးရင်း မအိပ်တတ်တော့ လူကနှုန်းနေပြီး စားချင်စိတ်က မရှိဘူး၊ ဗိုက်မဆာဘူး ဖြစ်နေတာ၊ လူကြီးတွေက နည်းနည်းစားပါ အတင်းပြောလို့မှာဖြစ် စားဖြစ်ခဲ့တာ။ စားလိုက်တော့ လည်း ကုန်သွားတာပါပဲ။ နှုန်းနေတော့ မှာသမျှ စားစရာ အကုန် ဓာတ်ပုံ မရိုက်ဖြစ်ခဲ့၊ ဒီနှစ်ပွဲသာ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် လမ်းမှာ နားတဲ့စားသောက်ဆိုင်က အစားအသောက်တွေက ပထမ ကြည့်တော့သာ စားချင်စဖွယ် မရှိသလို ခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် တကယ်စားကြည့်လိုက်တော့ အတော် စားလို့ ကောင်းတာပဲ။ ဒါက အပြန်မှာ မနက်စာ စားတဲ့ ပုံနော်။ သေချာအောင် ထပ်ပြောတာပါ။ ဆိုင်နာမည်က အောက်ကပုံမှာ။ ဒီပုံက ကားပေါ်က လှမ်းရိုက်ထားတာ၊ ပုံထဲမှာပါတဲ့ ကားက ကျွန်မတို့ စီးခဲ့တဲ့ကား မဟုတ်ဘူး။
အဲဒီ ခရီးသွားတုန်းက လမ်းမှာ စားခဲ့တဲ့ အစားအသောက်ပုံတွေ နဲ့တခြားရန်ကုန်က အစားအသောက်ပုံတွေကို တင်ရမှာ ပျင်းနေတာရယ်၊ အားနာသလိုလို လည်း ဖြစ်နေတာရယ်ကြောင့် မတင်ဖြစ်ခဲ့တာ...... ခုများတော့ တစုံတယောက်သောသူ အစ်မကြီးတစ်ယောက်ကြောင့် နည်းနည်းခြင်း တင်ဖြစ်တော့မယ် ထင်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 5/13/2010 12:12:00 AM6comments
If you are going to let every little thing bother you its going to beavery long night.
--The princess and the frog.
Posted by Nay Nay Naing at 5/12/2010 10:52:00 AM3comments
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး မှောင်လို့မဲလို့ ။ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၇ နာရီ ပဲရှိသေးသည်။ မုိုးတွေအုံ့ နေတာကိုး၊ ဒါပေမယ့် မိုးမရွာသေးပါ။ ရထားစီး အိမ်ပြန်လာသည်။ ဗိုက်ဆာသည်။ စိတ်ပင်ပန်းသွားလျှင် အစာကြေလွယ်ပြီး ဗိုက်ပိုဆာတတ်သည်လို့တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြောသည်။ ဟုတ်မဟုတ် တတ်အပ် မပြောနိုင်။ ယနေ့ အဖို့ယခင်နေ့ များထက် ပိုဆာနေသည်ကတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
ရထားပေါ်က အဆင်း လူတွေများသည်။ မိုးရွာ မနေပါ။ ရေစပ်စပ်တွေရသဖြင့် မိုးရွာသွားသည်ဟု ယူဆရသည်။ ဒီည ညစာကို မြန်မာထမင်းဟင်း ၀ယ်စားဖို့ စိတ်ကူး လိုက်သည်။ လူတွေကြားတို့ ဝှေ့ ၊ ထမင်းဆိုင် ရောက်အောင်သွားခဲ့သည်။ ကိုယ့်ရှေ့ မှာ လူ ၃၊၄ ယောက် ရှိနေသည်။ ကိစ်စမရှိ၊ အလျှင်မလို၊ စောင့်နေလိုက်သည်။ ကိုယ့်အလှည့် ရောက်ပြီ။ ထမင်း ကုန်သွားသည်။ အတော်ရောင်းကောင်းပုံ ရသည်။ ဘေးဆိုင်မှ ထမင်းအမြန်သွားယူလာလို့တော်သေးသည်။
ဘာစားမလဲမေးသည်။ ထမင်း ပါဆယ်သူသွားမည်ဟု ပြောလိုက်သည်။ ထမင်းသပ်သပ် ဟင်းသပ်သပ် ထည့်မည်လားဟု မေးသည်။ မှတ်မိနေသည် ထင်သည်။ ကျွန်မ အဲ့ဒီဆိုင်တွင် ထမင်းဝယ်စားသည့် အခါတိုင်း ထမင်းနှင့် ဟင်း ဘယ်သောအခါမျှ ရောထည့်ယူလေ့ မရှိခဲ့ပါ။ ဖြတ်ကနဲ ဆိုသလို နာမည်ကြီး၊ နာမည်ကျော်၊ လူသိများ ဘလော့ရေးသည့် အစ်မကြီး တစ်ယောက်ကို သတိရသွားသည်။ (ဘာကြောင့် သတိရသနည်း မမေးပါနှင့်အဖြေမရှိ။) ထုို့ ကြောင့် ထမင်းနှင့်ဟင်း ရောထည့်မည် ဟုပြောလိုက်သည်။ အံ့သြသွားသည် ထင်သည်၊ ရောထည့်မှာလား၊ သေချာအောင် ထပ်မေးနေသဖြင့် ဟုတ်ကဲ့ ဒီတစ်ခါ ရောပြီးယူမယ် ထပ်ပြန်ပြော လိုက်ရသေးသည်။
ယနေ့ညနေ ယခင်အကြိမ်များထက် စကားအတော်များများ ပိုပြောလိုက်ရသည်။ ပဲသီးကြော်ယူမည်၊ အရည်တွေမပါအောင် ခပ်ထည့်ပေးပါ။ အမဲသားကြော် ယူမည်၊ ဆီတွေ အများကြီး မပါပါစေနဲ့ ၊ ဆီစစ်ထည့်ပေးပါ။ ကြက်သားဟင်း ယူမည်၊ ဒါလည်း အနှစ်အများကြီး မထည့်ပါနဲ့ ၊ ဆီတွေ အများကြီးမထည့်ပါနဲ့ ။ ကြက်သားဟင်းတစ်ကော် ကော်ထည့် လိုက်သည်တွင် တော်ပြီ အစ်မ၊ ရပြီ၊ ထပ်မထည့်ပါနဲ့ တော့။ ထမင်းဆိုင်မှ ထည့်ပေးနေသည့် အစ်မကြီးအဖို့ထူးဆန်းသွားသည် ထင်သည်။ သူက ထပ်ထည့်ပေးချင်နေသေးသည်၊ ရပြီ မထည့်ပါနဲ့ တော့ဟု ထပ်ပြောလိုက်ရသည်။ မတတ်နိုင် သူထပ်ထည့်လည်း ကိုယ်က ကုန်အောင် စားနိုင်မည် မဟုတ်သဖြင့် အပိုမဖြစ်စေချင်။ အရွက် တမျိုး၊ အသား တမျိုး တော်ရောပေါ့ဆိုလျှင် ဒီနေ့ အဖို့ဗိုက်အတော် ဆာနေသည်။ အသား ၂ မျိုးလောက်တော့ စားသင့်နေသည်ဟု ယူဆမိသည်။
အိမ်ရောက်ပြီ။ ဟို အစ်မကြီးကို သတိ အလွန်ရနေသေးသဖြင့် ၀ယ်လာသော ထမင်းထုတ်ကို အရင် ဓာတ်ပုံရိုက် လိုက်သည်။ သူ့ ကို သတိရသဖြင့်သာ အခုလို ၀ယ်လာမိခြင်း ဖြစ်သည်။
ဟို အစ်မကြီး ကျေးဇူးကြီးမား လှပေသည်။ ယခင်အခါများတွင် မြန်မာထမင်းဆိုင်မှ ထမင်းဟင်း ၀ယ်စားသည့် အခါတိုင်း ထမင်း၊ ဟင်းအရွက် တမျိုး၊ အသား တမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်မျိုးကို သီးသန့် စီ ၀ယ်ယူလေ့ရှိသဖြင့် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၆ ဒေါ်လာ မှ ၈ ဒေါ်လာ အတွင်း ကျလေ့ရှိနေရာမှ ယနေ့ တွင်မူ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၄ ဒေါ်လာသာ ကုန်ကျခဲ့ သဖြင့် တစ်ဝက်နည်းပါးမျှ အကုန်အကျ သက်သာသွားခဲ့သည်။
ဟင်းဆီ၊ အနှစ်များ၊ အရည်များ မပါအောင် ပြောပါသော်လည်း ထမင်နှင့် ဟင်းများ ရောထည့်ခြင်း အကျိုးဆက်ကြောင့် ရှောင်လွှဲမရ၊ အတော်များများတော့ ပါလာသည်။ ကိစ်စ မရှိပါ။ ဒီနေ့ အဖို့သည်းခံနိုင်သည်။ ထမင်း အောင်ပိုင်း၊ ဆီဝပ်နေသောနေရာကို ချန်လှပ်ပြီး စားသောက်လိုက်ပါသည်။
ဒီနေ့ ညစာ စားသည့်ပမာဏ အနည်းငယ်များသွားသဖြင့် အစားကြေဆေးပါ စားထားလိုက်သည်။ ကြိုတင် အစားထားပါက ညနက်ပိုင်းတွင် ဗိုက်အောင့်မှု့ဝေဒါနာကို ခံစားရမည်မှာ သေချာသလောက်ရှိနေပါသည်။ ဟို အစ်မကြီးကို သတိရနေပါသေးသည်။
Posted by Nay Nay Naing at 5/11/2010 09:03:00 PM6comments
ဟိုတနေ့ က နေ့ လည် ထမင်းစားချိန် သိပ်မဆာတာနဲ့Camera ယူပြီး အလုပ်နားတစ်ဝိုက် မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာတွေ လျှောက်သွား ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အလုပ်နားတစ်ဝိုက် တိုက်တွေအကြားမှာ ကုန်းမြင့်လေးတွေ ရှိတယ်။ လျှောက်သွားကြည့်ချင်တာ ကြာပါပြီ။ အခု ငှက်ပျောဖူးတွေကိုလည်း ကုန်းမြင့်လေးတစ်ခုပေါ် ပေါ်တတ်သွားရတဲ့ လမ်းမှာတွေ့ တာပါ။ အဲဒီလမ်းလေးက ဆက်တက်သွားရင် တွေ့ ရတဲ့ နေရာလေးက လှတယ်။ အနားတစ်ဝိုက်မှာ စုံတွဲ တစ်တွဲကို ( မင်္ဂလာဆောင်အတွက် ထင်ပါတယ်) ဓာတ်ပုံတွေ ရုိုက်နေတာ တွေ့ ခဲ့တယ်။ တစ်ရက်ရက် နေသိပ်မပူ၊ မိုးမရွာတဲ့ နေ့ လည်တစ်ခုမှာ ထပ်သွားကြည့်အုံးမယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 5/09/2010 07:53:00 PM2comments
ဂေါ်ဖီရိပ်ရိပ်လေး လှီးထားတာပါမယ်၊ ပဲကြာဇံ၊ အာလူးပြုတ်၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ ကြက်သွန်နီ ဆီချက် ၀ါဝါမွှေးမွှေး ခပ်များများနဲ့ ဆို သိပ်ကြိုက်ပေါ့။ အခုလည်း မဆိုးပါဘူး။ စားလို့ ရပါတယ်။
တစ်ယောက်သောသူ စားချင်နေတယ်ဆိုလို့ကျွန်မစားဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အစားအသောက်တစ်မျိုး..
အဓိက တရားခံက ဟိုအစ်မကြီးပေါ့။ သူက စတာပဲ။ ကျွန်မလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်က ထွက်လာကတည်းက စားဖြစ်ခဲတယ်။ ဒါမျိုးကို အပြင်ဆိုင်မှာ စားလေ့မှ မရှိခဲ့တာ။ အိမ်မှာတုန်းကဆို စားရင်လည်း၊ သူများ အဆင်သင့် သုတ်ပေးတာမျိုး မကြိုက်ဘူး။ အသင့် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အစာပလာတွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ကိုယ့်ဘာသာ ထည့်တယ်၊ ပြီးမှသာ ပန်းကန်ကုို လူကြီးတွေပေးပြီး အပေါ့အငံ အစပ်အဟတ် တည့်အောင် သုတ်ပေးပါပြောလေ့ ရှိခဲ့တယ်။ ပြီးရင် အပေါ်က ကြက်သွန်နီ ဆီချက်ဖတ် များများလေး ထပ်ထည့်ပြီး အသားကြော် တစ်မျိုးမျိုးနဲ့စားတယ်။ ခုများတော့ ဒါမျိုးဝေးနေတာ ကြာပါပြီ။
ရှိတဲ့ ငါးမုန့် နဲ့ကြက်ဥ ပါကြော်ပြီး စားလိုက်တယ်။
စားချင်တယ် ပြောတာတွေထဲက ဒီမှာရနိုင်တာတွေကို သတိတရ လိုက်စားပေးနေမိတော့ ခုရက်ပိုင်း တွေ့ တဲ့သူတွေက ဟိုတလောကလောက် မပိန်တော့ဘူး ပြောကြတယ်။ စေတနာ လက်ငင်း ချက်ချင်းကို အကျိုးပေးတာလို့ ပြောရမယ် ..
Posted by Nay Nay Naing at 5/08/2010 06:52:00 PM4comments
Posted by Nay Nay Naing at 5/07/2010 06:23:00 PM9comments
နေ့ စဉ် မဟုတ်တောင် တပတ်ကို ၃-၄ ခါ လောက် အနည်းဆုံး ဖတ်ဖြစ်တဲ့ Comics တွေထဲမှာ Garfield အပြင် Zits က Comics တွေလည်း ပါတယ်။ တချို့ ဟာလေးတွေ ဖတ်ပြီး သဘောကျလို့ပြုံးမိတယ်။
I'm just offeringarelentlessly contrary point of view.
I'm not ignoring you..
I'm just paying attention to something more interesting.
Posted by Nay Nay Naing at 5/05/2010 09:58:00 AM3comments